mairie-antananarivo – Fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny tetik’asa PRODUIR
administrateur 16 jolay 2018 Commentaires fermés
Natomboka tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny Hotel Carlton Anosy omaly ny tetik’asa PRODUIR, tetikasa lehibe fampandrosoana maharitra sy ny fanohizana izany eto amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ireo Kaominina manodidina na Grand Tanà. Anisan’ny tonga nanokatra izany lanonana izany nisolotena ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana, ny Lefitra voalohan’ny Ben’ny tanàna Emilien Ramboasalama sy ny Ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany Christine Razanamahasoa ary ny Solontenany avy ao amin’ny Banky iraisampirenena Coralie Gevers sy ny tomponadraikitra isan-tsokajiny.
Nanambara ny lefitra voalohan’ny Ben’ny tanàna Emilien Ramboasalamana mahakasika ny tetik’asa, fa tafiditra ao anatin’ny vinan’ny Ben’ny tanàn Lalao Ravalomanana izany satria fijerena ny sosialim-bahoaka, ka samy tafaray ny tia sy ny manina. Marihana fa anisan’ny nanome torimarika ny fijerena eny amin’ny toerana iva ny ben’ny tanàna. Tombony azon’ ny kaominina Antananarivo Renivohitra amin’izany dia ny fanofanana momba ny”recouvrement fiscal” na fampidiran-ketra, mba hampakarana ny hetra miditra amin’ny fiadidiana ny tanàna.
Avy amin’ny alalan’ny Ministeran’ny fanajariana ny tany no niantohan’ny tetik’asa ary ny kaominina Antananarivo Renivohitra no tena hahazo tombontsoa betsaka amin’izany , ny ao anatin’ny Boriboritany 1,4,6 no tena vokasik’izany tetik’asa izany. Ny Lankandrano C3 izay mahazo eo Anosy hatrany Ambodimita sy ny lemaka eto Antananarivo toy ny etsy amin’ny Lakandranon’ Andriantany GR , izay mbola miitatra amin’ny kaominin’ny Bemasoandro Itaosy, Andranonahoatra sy Anosizato Andrefana no hamboarina amin’izany.
Ny tanjona dia hitsinjovana ireo olona eny amin’ny faritra iva sy ny fanalalahana ny lakandrano fivarinan’ny rano mba hialana amin’ny fiakaran’ny rano… 75 tapitrisa dolara amerikana no famatsiambola avy any amin’ny Banky iraisampirenena anatanterahana ny tetik’asa ary 5 taona no faharetan’ity tetikasa “PRODUIR” ity. Ao anatin’ny tetik’asa dia marihana fa miteraka asa ho an’ny olona miisa 60.000 isandro izany.